Toeram-pisakafoanana ambony rosiana 10 ambony - Kaody Bonus Bonus amin'ny Internet
Top 10 Rosiana Casino Sites
(786 vato, average: 4.00 avy tany 5)
Loading ... Ny filokana dia nanjary iray amin'ireo olana politika lehibe indrindra ho an'ny governemanta Rosiana hatramin'ny nanombohan'ny taonjato 21t noho ny firongatry ny milina fiara sy trano filokana. Nanomboka niparitaka nanerana ny firenena ny kazôma, izay niteraka fiahiana lehibe ho an'ireo manampahefana ao an-toerana, izay nanahy ny amin'ireo tanora.
Flag of RussiaCurrently, filokana any Rosia ara-dalàna ao amin'ny faritra maro faritra foto-kevitra. Taona vitsy lasa izay - in 2009 - dia niantso toy ny tsy ara-dalàna eo ny sisa amin'ny faritanin'ny firenena ho anisan'ny henjana Rosia politika manohitra ny filokana.
Ny manampahefana ao amin'ny firenena dia tsy manohana mihitsy ny hetsika filokana amin'ny aterineto, izay nanjary antony mahatonga ny mpilalao hidirana amin'ny tranokalan'ny poker raha tsy ara-bakiteny.
Lisitry ny Top 10 New Rosiana Online Casino Sites
History ny filokana Fitsipika any Rosia
Ny endri-panafika rehetra dia voarara tamin'ny 1928 tamin'ny fomba ofisialy ary tamin'ny fotoana napetrak'i Rosia teo ambany fitondran'ny Sovietika. Izany dia naharitra hatramin'ny faran'ny faran'ny 1980, raha misy fitsipika sasantsasany mandalo amin'ny fiovana. Tao amin'ny 1988, ny firenena dia nanamboatra milina fanoratana ara-dalàna ihany any amin'ny faritra sasany. Ny fandraràna ny filokana dia najanona tanteraka tamin'ny 1989.
Ao amin'ny vanim-potoana teo anelanelan'ny 1989 sy 2002 dia ny fotoam-maranitra fitomboan'ny ny isan'ny Casino miasa amin'ny faritanin'i Rosia, maherin'ny 50 trano filokana ho mihazakazaka eo amin'ny tany Moscou irery. Io karazana fialam-boly lasa bebe kokoa eo an-toerana malaza olom-pirenena, fa ny firenena lalàna dia somary malahelo, izay nanao ny firenena ny Governemanta handray maika fepetra mifehy ny asa.
Izany maharitra mandra-2006, rehefa voarara ny lalàna izay rehetra endriky ny aterineto ao amin'ny firenena filokana dia nandalo ny governemanta Rosiana. Mandra-pahatongan'izany, dia nomena mpanjifa an-toerana amin'ny fidirana amin'ny tranonkala filokana indrindra.
Ao 2009, filokana dia ara-dalàna tao amin'ny fitambarany faritra efatra ny tany ihany; Kaliningrad Oblas, Altai Krai, Primorsky Krai sy Krasnador Krai. Ny toe-quo naharitra hatramin'ny telo taona tatỳ aoriana. Ao 2012, filokana ny aterineto ao amin'ny firenena ny fandraràna nentina dingana iray lavidavitra kokoa noho ny didim-pitsarana ny Fitsarana Tampony any Rosia, izay nilaza fa mpanome tolotra aterineto filokana 'tranonkala dia tsy maintsy ho voasakana ao amin'ny firenena.
Ny Roskomnadzor - lisitra izay milaza ny vohikala nanambara toy ny tsy ara-dalàna avy amin'ny Governemanta Rosiana --bahoaka natao tatỳ aoriana any 2012. Ny lisitra ahitana ny momba ny tsipiriany maro sehatra iraisam-pirenena natao ny mpandraharaha filokana. Izany no nahatonga ny sasany amin'ireo anarana lehibe indrindra ao amin'ny orinasa mba hanidy ny fidirana ny vohikala ho an'ny mpanjifa Rosiana, fa ny mpandraharaha hafa mbola manome ny tolotra ao amin'ny firenena.
Nisy fandrarana tanteraka ny miloka indray ao amin'ny URSS, araka izay filokana famerana ireo hiavian'ny kely, indrindra fa any amin'ny faritra izay nitsidika matetika ny mpizaha tany. Ny fitomboan'ny isan'ny trano filokana sy ny trano dia natao hilokana misy fandrarana mandra-filokana dia nanainga ny Governemanta tamin'ny Aogositra 1989 sy ny toerana lalao voalohany tany Moscou novohana.
Na izany aza, mahantra fitsipika, fanaraha-maso sy ny fanaraha-maso ny asa filokana eo amin'ny faritra ao amin'ny firenena lasa ny antony mahatonga filokana no nanomboka be olana ho an'ny Governemanta. Nitarika ho tanteraka tsy ny Rosiana lalàna in 2009 filokana.
Filokana asa atao ao amin'ny trano filokana ara-batana no voarara ao amin'ny firenena noho ny antsasaky ny folo taona izao.
Araka ny voalaza etsy ambony, ny filokana dia amin'ny fomba ofisialy any Rosia ara-dalàna ao amin'ny faritra maro any amin'ny faritra lavitra hita faritra ao amin'ny firenena. Ireo faritra ireo: Kaliningrad Oblast, Azov-City (ny ampahany amin'ny Rostov Oblast dia nesorina tamin'ny lisitra), Altai Primorsky Krai sy Krai.
Ny Primorsky Krai dia heverina ho voafidy tanteraka mba hanararaotra ny tsena aty Azia. Ny faritra dia manakaiky ny sisintany Shinoa, izay manome ny indostrialy ao an-toerana ahafahana manintona ireo sokajy avo any Azia ho any amin'ny faritra.
Misy ihany koa ny drafitra ho Super Casino Vladivostok toerana teo akaiky teo ihany koa izay mikendry amin'ny hisarihana bebe kokoa ny faritra mpilalao.
Tamin'ny volana Desambra 2014, dia nazava fa ny filoha Vladimir Putin ny maitso nanome fahazavana ho fampitomboana ny isan 'ny foto-kevitra isam-paritra faritra, izay niteraka an anisan'izany Crimea sy Sochi amin'ny lisitra.
Online filokana, amin'ny lafiny iray hafa, dia voarara tanteraka ao amin'ny firenena. Toy izany koa ny asa filokana hiaina ao amin'ny sisa Rosia faritany. Ny politikan'ny firenena dia tsy mampiseho amin'ny fomba mba hisy ny fiovana eo amin'ny fitsipika ireo na oviana na oviana tsy ho ela tsy ho ela.
Amin'izao fotoana izao, filokana any Rosia efa mihozongozona ny foto-kevitra, toy ny voafehy, ary zara raha tsy voafehy maso fiakaran'ny filokana lehibe niteraka olana eo anivon'ny mponina eo an-toerana, ary indrindra fa ny tanora kokoa ny olona.
Ao amin'ny firenena anefa dia misy lottery federaly, izay ara-dalàna. Ny loteria dia manolotra mpilalao ny fahafahana miady amin'ny alàlan'ny lozisialy roa - Gosloto sy Sportloto. Nisy fanovana sasany koa natao tamin'ny tsenan'ny tsenan'ny fanatanjahan-tena, ary ny fampiharana ny fahazoan-dàlana manokana izay takian'ny mpandraharaha.
Fitsipika filokana sy fahefana any Rosia
Filokana lalàna in RussiaCurrently, ny Governemanta Rosiana fanjakana manao ny tena asa lalàna rehetra sy ny asa mifandray amin'ny filokana. Misy sampan-draharaha federaly mpanatanteraka izay mitondra ny lohateny hoe mba hanao asa sasany, mba hanara-maso fitsipika sy fitsipika ara-dalàna raha ny filokana fikambanana.
Ankoatra izany, ireo manam-pahefana federaly mpanatanteraka manana compétences sasany mifandray amin'ny fanaraha-maso sy ny fanamarinana ny asa toy izany. Fitondram-panjakana maro ny fatin'ny olona-panorenana fikambanana ao amin'ny firenena ihany koa dia manana ny fahefana hanatanteraka ny asa ny lalao ara-potoana fitantanana sy ny fitsipika.
Araka ny lalàna Rosiana, asa filokana dia azo nalamin'i fikambanana ara-dalàna, izay voasoratra anarana ao amin'ny taratasy ho any amin'ny fitsipika sy fomba fiasa napetraky ny Federasiona Rosiana. Tsy misy fikambanana ara-dalàna, izay mifandray amin'ny firenena mihitsy, ny firenena na ny sampana-Panorenan'i governemanta ao an-toerana manampahefana nanome ny fahafahana mandamina sy mihazona ny filokana asa sy ny asa.
Misy faritra efatra lalao niforona ao amin'ny taratasy sy ny lalàna ao amin'ny Federasiona Rosiana. Rehefa nanaiky ny Filoha Putin tamin'ny fampitomboana ny isan'ny lalao manokana faritra, toy izany no antenaina mba ho nanangana ao anatin'ny Altay, Kaliningrad sy Primorie, ary koa eo amin'ny sisin-tany eo amin'ny faritra sy Rostov Krasnodar faritra.
Ny governemanta dia ny manana ny fahefana mamorona sy hanafoanana ny lalao faritra, ary koa ny fanamafisana ny fametrahana ny faritra dokambarotra 'anarana, sisin-tany sy ny toetra hafa ambanin'ny teny ny fanekena ny governemanta vatana in-panorenana fikambanana.
Ny manam-pahefana amin'izao fotoana manan-danja izay mitondra ny lohateny hoe amin'ny ankapobeny compétence ny misy endrika filokana asa eo amin'ny faritanin'i Rosia dia ny Governemanta sy ny Minisitry ny Fitantanam-bola ao amin'ny Federasiona Rosiana.
Ny Tax Federaly Service ao amin'ny firenena ihany koa ny sasany nomena andraikitra mba hisoratra anarana bookmaking mpandraharaha, ary ireo hilokana totalizators hevitra. Ihany koa ny fanamarinana ny tompon'andraikitra ara-teknika ny toe-piainana fitaovana filokana. Misy ihany koa ny andraikitra manokana omena ny manam-pahefana sasany, raha ny amin'ny mifehy, ny fanaraha-maso sy ny fitsipika any am-parany ny fahaiza-ankapobeny.
Ny asa mpanao lalàna lehibe izay mamaritra ny fototry ny filokana any Rosia sy ny manome fitsipika ho an'ny vahaolana ny filokana sy ny asa fanompoana ao amin'ny firenena dia ny Lalàna Federaly Desambra 29th, 2006 No. 244-FZ.
Araka ny voalaza etsy ambony, ny Filokana Lalàna miantso isan-karazany ny filokana tsy ara-dalàna, afa-tsy ny karazana izay nifehy manokana eo ambany fepetra in indrindra nanao filokana faritra.
Misy ihany koa ny fananganana lalàna ambanin-javatra maromaro izay manome fanamarihana sy fanazavana tsara kokoa momba ny fepetra takiana sy ny fomba fampiharana ny lalàna filokana. Saingy, ny lalàna mifandraika amin'ny fitsipiky ny loteria dia tsy mitovy. Ny loterana dia fehezin'ny lalàna federaly "On Lottery" amin'ny 11 Novambra 2003 lah. 138-FZ.
Online Miloka any Rosia
Online filokana in RussiaConsidering amin'ny ankapobeny ny toe-indostrian'ny filokana tany Rosia, an-tserasera ihany koa ny filokana dia mifandray amin'ny olana tsy mitsaha-mitombo. Noho izany, dia tsy mahagaga raha aterineto any Rosia filokana dia toy ny tany be raisina ho toy ny hetsika ara-trano filokana. Ny tranonkala-monina amin'izao fotoana izao ny tolotra filokana mavitrika voarara.
Maherin'ny folo taona lasa izay - tao amin'ny 2006 - Lalao vintana no nilaozan'ny lalàna ofisialy tamin'ny fomba ofisialy. Poker, na izany aza, dia mbola mijanona ao anaty faritra mena noho ny adihevitra na tsia izany na fahaizana na lalao.
An-toerana mifototra amin'ny mpilalao no tratry ny ananany ny fidirana amin'ny vahiny mpamatsy 'vohikala, na inona na ny zava-misy fa efa nangataka mpanome tolotra aterineto mba hanakana tranonkala izay mifandray amin'ny filokana.
0.1 Lisitry ny Top 10 New Rosiana Online Casino Sites
2.1 History ny filokana Fitsipika any Rosia
2.3 Fitsipika filokana sy fahefana any Rosia
2.4 Online Miloka any Rosia